Saameynta Maandooriyuhu ku hayo Nolosha Jiilka Maanta. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka November 11, 2017	0 539 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maandooriyuhu kaliya ma saameynayo shaqsiyadda, hayeeshe wuxuu sidoo kale raadeyn karaa qoysaska, shaqooyinka, caafimaadka qofka, habka daryeelka caafimaadka, bulshada deegaanka iyo mujtamaca guud ahaan.
Previous: Suuq lagu iibiyo Hadyadaha lammaanaha kala hara oo la furay!
Next: Qormo – Dal-jir Dadkiisa ka didaya miyaa Dalkiisa dhowri kara?!
Binolanan – Magaalada Xanta ay Mamnuuc ka tahay!
Maalinta Caalamiga ee Ganacsiyada yaryar iyo Kuwa Meel-dhexaadka.